China 606 / 400L-naịlọn ihe onwunwe anọgidesi ọcha Cleaner na akwụkwọ Ndinam ụlọ ọrụ mmepụta ihe na suppliers | YUNFENG
606 / 400L-naịlọn ihe ala anọgidesi Cleaner na akwụkwọ na-eme osisi
Obere ihe nhicha nke nhicha a Nke a na etinye ego kacha mma karia kaadiboodu, ihe eji ehicha kaadiboodu bu udiri ihe eji eme ihe iji wepu nkpuru ahihia, foams, plastik na ihe ndi ozo. Ọ na ọtụtụ-eji maka emegharị pulp Ndinam na egg tree mmepụta akara. New ụdị Arọ oru oma Cleaner The YF Arụ Ọcha Cleaner na-bụ-eji maka wepụ arọ adịghị dị ka gravel, scrap ígwè, ájá na nnukwu ink ahụ si d ...
Okpokoro oru oma Cleaner
A na-ejikarị ihe nhicha ọcha YF mee ihe maka iwepụ adịghị ọcha dị ka gravel, iron scrap, ájá na ájá ink dị ukwuu site na ụdị pulp dị iche iche. na nọmba nke cleaner.High nhicha arụmọrụ, nke na-ezere ìgwè ash ash na nke ikpeazụ na ngalaba.High ntụkwasị obi nke ịrụ ọrụ, agaghị egbochi.
.Dị YF400 / 600
Ike ngafe nke otu ngwa (l / min) 400-480
Max na-arụ ọrụ okpomọkụ (ºC) 70
Max arụ ọrụ mgbali (Mpa) 0.4
Ntinye ntinye (%) ≤2%
Sacha mmiri 20-60l / nkeji
YF600 usoro elu arụmọrụ arọ slag eliminator nwere ike ọtụtụ-eji nile di iche iche nke pulp ka ezi mmapụta fọdụrụ ihicha na nkewa, bụ a dịgasị iche iche nke pulping ngwá kenha na oru mgbanwe nke mbụ oke nke slag mwepụ akụrụngwa.
Kpụrụ na nhazi nke ụdị YF600 ụdị slag remover
1. Ọdịdị kewara ekewa
Cleaner maka gbawara n'etiti Ọdịdị, dum Cleaner nwere ike kere n'ime 3-4 ngalaba, mfe ebukọtala na-eji dochie.
2, ụzọ dị iche iche nke slag orùrù
Dị ka mkpa dị iche iche nke ndị ọrụ na-ahọrọ ụzọ dị iche iche nke slag orùrù, imeghari ka onye ọrụ na-arụ ọrụ na gburugburu ebe obibi.
3, seramiiki na-eguzogide slag mwepụ ọnụ
4. A na-ejikọta ọkpọkọ slurry ọ bụla na sooks nke alaka slagger, ma kwadebe ya na valvụ iji kwado mgbanwe nke usoro ihe niile na otu slagger.
5. Enweghị akụkụ na-agagharị, arụ ọrụ siri ike na nke a pụrụ ịdabere na ya.
Njirimara ihe owuwu pụrụ iche na-eme ka onye na-ehicha slag dị arọ nwere njirimara ndị a:
1, nwere ike iwepụ slurry na ájá, ajịrịja, waya waya na adịghị ọcha ndị ọzọ;
2, mụbaa ego na n'ihu slag ike, dịtụ belata ọnwụ nke eriri;
N'ime oge ọrụ, ọ nwere ike mepụta usoro mmiri mmiri siri ike, nke nwere ike wepu ihe na adịghị ọcha.
4. Signrịba Ama slurry azọpụta mmetụta.
Nke gara aga: Ezi ejiji dị mma na corrosion na-eguzogide ọgwụ 95 alumina ceramic ring liner
Osote: centri-Cleaner Wepụ slag tupu ịpịpịa ya na sie sie iji ya maka akwụkwọ
obere agbanwe agbanwe
Naịlọn Akwụkwọ Cleaner